Arooska Gareth Bale oo cabsi darteed dib loo dhigay!!!!! – Gool FM
Arooska Gareth Bale oo cabsi darteed dib loo dhigay!!!!!
Byare April 30, 2017
(Madrid) 30 Abriil 2017. Xafladda arooska ee Gareth Bale ayaa lagu waday inay dhacdo xagaagan balse dib ayaa loo dhigay.
27-jirka u safta Real Madrid ayaa lagu waday inuu xagaagan la aqal galo gabdha 26 jirka ee lagu magacaabo Emma Rhys-Jones, taa oo ay is jeclaayeen tan iyo waqtigoodii Dugsileyda, balse dib ayaa loo dhigay kaddib casbi laga qabo inay soo weeraraan burcad ka ganacsata daraagiska.
Reerka gaclisada Bale ayaa waxay sanadkii hore ku lug lahaayeen dirir/dagaal qolo burcad ah kaddib markii la waayay boorso ay ku jireen daroogo lagu qiyaasay 1-milyan.
Burcadda ayaa dab qabadsiiyay guriga Emma ayeeyadeed sidoo kale waxay gubeen baabuur tiilay bannaanka oo ay lahaayeen dad ka mid ah qoyska.
Waxaa laga cabsi qabaa in burcadaasi ay iminkana saameeyaan xaflada arooska Bale oo lagu waday inuu dhoco xagaagan waana mida imminka keentay in dib loo dhigo.
“Reer Gareth Bale waa ay walaacsan yihiin,” Ilo wareedyo laga helay reerka xiddiga reer Wales ayaa sidaa lagu yiri.
“Waxay qorsheynayeen inay xagaagan is guursadaan, laakiin iminka ma dhaceyso midaa. Emma aad ayay u murugeysan tahay, laakiin gabi ahaan way ku raacsan tahay inay tani tahay waxa ugu fiican ee la sameeyo.”.
Dib u dhaca ku yimid arooska Gareth Bale ayaa sidoo kale la micno noqon kara in Emma aabaheed ee Martin laga yaabo inuu awoodo inuu ka soo qeyb galo xaflada aroos gabadhiisa kaddib markii laga soo daayay xabsi ku yiilay Mareykanka oo loogu xiray sababo musuq maasuq.
"Costa waa weerar yahanka ugu fiican aduunka" - Conte oo amaanay weerar yahankiisa